Repoblikan' i Armenia ((mg))
Teny ofisialy Armeniana (fitenim-panjakana)
Tanàna lehibe indrindra Yerevan
- Rano (%) faha 138
29 743 km2 km²
- hakitroka faha 137
2 963 900 mpo.
Anaran'ny mponina Armeniana
Sandam-bola Dram (AMD)
I Armenia na ny Repoblikan' i Armenia dia firenena ao Azia Andrefana, manana velaran-tany mirefy 29 800 km² izy, tsy manana morontsiraka, be tendrombohitra. Tao amin' ny Firaisana Sôvietika taloha i Armenia izay mifanefi-tany amin' i Torkia ao andrefana, amin' i Jeôrjia ao avaratra, amin' i Azerbaijàna ao atsinanana ary amin' i Iràna ao atsimo. Amin' ny teny armeniana dia atao hoe Հայաստան / Hayastan na Հայաստանի Հանրապետություն / Hayastani Hanrapetut’yun i Armenia. I Erevan na Yerevan (armeniana: Երևան / Yerevan) no renivohiny. Nahaleo tena i Armenia tamin' ny taona 1991. Na dia ao amin' ny kôntinentan' i Azia aza i Armenia dia heverina ho isan' i Eorôpa ara-kolontsaina sy ara-tantara ary ara-pôlitika.
Sarin-tanin' i Armenia
Ahitana ny farihy lehibe Sevan, izay tahirin-drano lehibe, ny ao afovoany. Matetika ianjadian’ ny horohoron-tany i Armenia.
Ny Armeniana no vahoaka maro anisa ao Armenia, manaraka azy ny Azery, izay vahoaka vitsy an’ isa lehibe indrindra. Nandositra manany Azerbaijàna ny Azery taorian’ ny fiantombohan’ ny fifanolanana mitam-piadiana teo amin’ i Armenia sy i Azerbaijàna. Manodidina ny 5 tapitrisa ny Armeniana any am-pielezana, indrindra any amin’ ireo firenana tao amin’ ny Firaisana Sôvietika taloha sy any Etazonia ary any Frantsa. Kristiana ôrtôdoksa ny ankabetsahan’ ny vahoaka any Armenia.
Nianjadian’ ny ady nifanaovany tamin’ ireo firenena mpifanolo-bodirindrina aminy (Torkia sy Azerbaijàna), tamin’ ireo taona 1990, ny toekaren’ i Armenenia. Izany no mahatonga an’ ity firenena ity hiankin-doha amin’ ny fanampiana avy any ivelany. Tsy mbola mahantoka ny fahaleovan-tena ara-tsakafon’ io firenena io ny fambolena ao aminy, noho ny tsy fahampian’ ny tany azo volena.
Repoblikan’ i Firaisana Sôvietika taloha i Armenia nefa lasa firenena mahaleo tena tamin’ ny taona 1991, taorian’ ny faharavan’ ilay firaisana, sady nikambana tao amin’ ny Fiavanakaviamben’ ny Firenena Mahaleo Tena (Communauté des États Indépendants - CEI).
Momba an' i Armenia
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Armenia&oldid=1046045"
Dernière modification le 29 Jiona 2022, à 08:59
Voaova farany tamin'ny 29 Jiona 2022 amin'ny 08:59 ity pejy ity.